ရထားဖြင့်ပါရီမြို့မှအမ်စတာဒမ်သို့သွားပါ3နာရီ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်ပါရီမြို့မှအမ်စတာဒမ်သို့သွားပါ3နာရီ
ပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်ရောက်ရှိရန်တလမ်းတည်းဖြင့်ထက်ပိုရှိရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒါဟာင်. ထိုသူတို့ကသူတို့ပြုသမျှလိုလားသူများနှင့် cons အတူပါလာစဉ်က, သင်နှိုင်းယှဉ်စေသည့်အခါရထားအမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ကနေခရီးသွားလာမှုကိုအကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်နေဆဲ. ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှအကြောင်းပြချက်ပေး မီးရထားခရီးသွားလာ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်, သင်၌ရောက်ရှိမည်ချင်အထူးသဖြင့်လျှင် အမ်စတာဒမ် ပဲရစ်ကနေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့စတိုင်နဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်.
ရထား vs အားဖြင့်အမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့. ခရီးသွား၏အခြား Mode
ပါရီမှအမ်စတာဒမ်သို့ကားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်သေချာသည် ပါ မောင်း. သို့သျောလညျး, ကသာသင်အချိန်တတ်နိုင်ပါလျှင်သဘာဝကျပါတယ်ထိုသူနှစ်ယောက်မြို့ကြီးများအကြားလမ်းများသွားလာရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိပါတယ်.
မည်သို့ပင်သင်သည်သင်၏အပေါ်ယူရာလမ်းကြောင်း၏ ကားတစ်စီးခရီးစဉ် ပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်မှ, ကားလမ်းရှိပါတယ်, လမ်းအသုံးပြုခ, နှင့် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု စဉ်းစားရန်. အဆိုပါ drive ကိုအထိကြာနိုင်ပါတယ်6နာရီ, အကောင်းဆုံး; ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကြွင်းသောအရာမှတ်တိုင်များများအတွက်စီစဉ်ပေးရန်လိုပါလိမ့်မယ်. လည်း, မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအစဉ်းစားပါ နှင့်လောင်စာလမ်းတစ်လျှောက်လိုအပ်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နေ့လယ်စာစား. သူအပေါငျးတို့ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်တက် add ပါလိမ့်မယ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျကယ့်ကြားဖူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဘတ်စ်ကားကိုယူပြီးစဉ်းစားပါစေခြင်းငှါ စျေးအသက်သာဆုံးလမ်း ပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်မှသွားလာရန်. ဤစကားမှန်ပေမယ့်, ခရီး နီးပါးကြာမြင့်မည်7နာရီ. ဒါကလမ်းမပေါ်မှာရှိမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်. သင်တစ်ဦးအတွက်ကျဉ်းကျုတ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတောင်ပိုရှည်ခံစားရပါလိမ့်မယ် ဘတ်စ်ကား ကန့်သတ်အာကာသနှင့်အတူန်းကျင်ရွှေ့ဖို့.
အမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ကနေပျံသန်းဖို့ option ကိုလည်းဖွင့်. ဒါပေမယ့်စဉ် လေယာဉ်ခရီးစဉ် သာတစ်နာရီယူမည် 15 မိနစ်များ, ကကုန်းကြောင်းခရီးသွားကဲ့သို့တူညီသောအခွင့်အရေးမပူဇော်ပါဘူး. သငျသညျ First Class အတွက်နေမဟုတ်လျှင်, သင်ကိုယ်တိုင်မသက်မသာလေယာဉ်ထိုင်ခုံများတွင်ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
အဘယ်သူမျှမလှပသောလည်းရှိပါသည် ဥရောပရှုခင်း သငျသညျလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာသည့်အခါခံစားရန်. သင်တစ်ဦးဝင်းဒိုးကိုထိုင်ခုံများတွင်ထိုင်ခံရဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်သင်အများအားဖြင့်မှာကြည့်ဖို့ပြင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးရှိသည်လိမ့်မယ်; မဟုတ်ရင်, သငျသညျအားကိုးနိုင်ပါတယ် တစ်ဦးအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ် ရုပ်ရှင် သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန် တရားတော်. ထိုစဉ်မမေ့မလြော့ပါ လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်း သီအိုရီအပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သင်ဆဲကလေဆိပ်ရယူပါလိမ့်မယ်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံအတွက်ဆခွဲကိန်းရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ကပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်မှခရီးသွားလာမှကြွလာသောအခါ, Thalys ရထားနှင့်အတူရထားခရီးသွားကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုကမ်းလှမ်း. ဒါဟာပွဲတစ်ပွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်သွားလာအရှိဆုံးအဆင်ပြေများနှင့်အဆင်ပြေလမ်းဖွင့် မြန်နှုန်းမြင့်လေ့ကျင့်. ရထားတစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေသည်ကိုပင်သတိမပြုမိဘဲလွယ်ကူစွာရထားစီးနိုင်သည်.
ရထားနဲ့သွားရင်ပိုလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်, သိ. သင်မဆင်မခြင်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူလမ်းများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမမျှဝေပါတယ်. ထိုအများ၏အမြန်နှုန်းမှာ 300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ, သင်သည်သင်၏ရောက်ရှိ ခရီးလမ်းဆုံး ထက်ဝက်ကာလ၌ကကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်ယူမယ်လို့. high-speed ရထားပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်မှသငျသညျရနိုင်3နာရီနှင့် 19 မိနစ်များ. လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်မတူသည်, သင်ရပါလိမ့်မယ် အံ့မခန်းဥရောပကျေးလက် ခံစားရန်.
ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ, သင်စျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားခံစားနိုငျ, ရထားအားဖြင့်သင်တို့ကိုစီစဉ်လျှင်ပိုမိုချွေတာရှေးခယျြမှုခရီးသွားလာရာတွင်.
နှင့်အတူခရီးသွားလာခြင်းအားဖြင့် Thalys ရထား, သငျသညျအထိလက်မှတ်တွေဝယ်နိုင် 90 ရက်ပေါင်းသင့်ရဲ့ခရီးသွားနေ့စွဲမီနှင့်အထိကယ်တင် 75% သငျသညျဆိုပါကရထားလက်မှတ်တွေပေါ် သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထား စောစော.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride ရထား traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား travelamsterdam traveltips